Indlela To mthwalo Uloliwe Trip Across Italy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Indlela To mthwalo Uloliwe Trip Across Italy
ukhululekile, khangela stylish kwaye musa ukuba impahla kakhulu enzima. Apha ukupakisha njani ukuba uhambo kaloliwe enqumla Italy.
Indlela ukupakisha uloliwe – clothing, izicathulo, nezitsha
Nini bekuhamba koololiwe nge Italy, uya ufuna ukugcina umdlalo yakho fashion strong. Kodwa kunokuba ukupakisha zakho zonke, wayenxiba ozithandayo, ukhethe Iinkuphelo, kakuhle kunqunyulwa yakudala accessorize ngamaqhekeza ngqindilili mazwi. Umzekelo, pack ngokuba uhambo uloliwe a ijini abamnyama kakuhle ifakwe, t-shirts umqala polo khangela emfanelayo kuphela. Ngokuba imini jonga nje, ukumatanisa iiteki kunye nebhatyi denim. Ebusuku, ukongeza neeflethi ezisesikweni kunye isiziba ingxelo izacholo.
Qinisekisa ukuba zokupakisha isikhafu enkulu. Njengoko ngokunjalo enxibe ukuba ukufudumala xa ukuba iyabanda okanye ukongeza nangokuvulelekileyo ku ngubo, isikhafu enkulu inokufana ingubo xa uphumle phezu kwakho train ride. Unga nokuba ungayisebenzisa njengendlela ngengubo sepikiniki okanye itawuli beach zokwexeshana.
Xa kuziwa iingxowa, ukuba ingxowa enye enkulu mthwalo ongama shopping okanye beach essentials. Kufuneka ubhaka okanye cross-umzimba nangxowa imisebenzi yemihla ngemihla lokhenketho kunye nophantsi, clutch esemthethweni ngokuhlwa, ngoko ke kufanelekile xa ukupakisha ukuba uhambo uloliwe.
zokuhlamba, iimveliso beauty, kunye namayeza
Ngokuba uhambo oololiwe, kuluncedo ukuthenga zokuhamba-ubungakanani ukupakisha ukuba uhambo uloliwe yonke imveliso yakho ubuhle okanye inkonkxa umdla ebekwe ungazalisa iimveliso yakho. Ukuba uhambo lwakho ixesha elide ngaphezu kweveki okanye ezimbini, cinga ukuthenga ngeshampu kunye gel uhlamba ngexesha uhambo lwakho, kunokuba bezise egcwele-ertyisi engxoweni yakho – ukudibanisa ubunzima kunye ukuthatha indawo. Usenakho nokucela ukuba iisampulu kwi counter beauty lendawo yakho. Baya kudla kuba nako ukukunika kunye neenguqulelo ezincinane zonke iintswelo zenu, ezifana mascara, serum nasebusuku cream.
Xa kuziwa makeup, inqumle ucwangciso lwakho phantsi kwakho uhambo. A amafutha yabangazijongisisi nzulu, a bahlazeke ukuba kabini njengoko eyeshadow kunye mascara uya kukugcina selfie-ukulungele. Unako kwakhona unokuza imveliso multi-nenjongo efana vaseline okanye iiyure ezisibhozo-cream, okungaba nithathele lip, iphawule okanye amafutha olunzulu.
Musa ukulibala amayeza wakho kagqirha, kwakunye ikiti encinane zoncedo lokuqala. ntlungu, amayeza isicaphucaphu kunye band-AIDS musa ukuthatha indawo kakhulu, Ukuba ufuna into ethile, uza kukwazi ukufumana oko kwi-Italian ekhemesi okanye ivenkile isiyobisi.
Entertainment, electronic, kunye namaxwebhu
A uhambo kaloliwe lixesha egqibeleleyo lokuzikhumbuza indlela yokufunda, kunjalo, iincwadi ukuba libe ne enzima. A ilize, tablet okanye smart kunye ukufunda app yindlela enkulu Stock phezu izinto zokufunda ngoxa ukugcina ukukhanya kwakho impahla ngoko qiniseka ukuba upakishe uloliwe siyakhubeka tablet yakho. Unako kwakhona download neencwadi ezishicilelwe emacwecweni onwabele imboniselo kwi window ngexesha uphulaphule inoveli yakho.
Kunye amaxwebhu akho imfuneko yokuhamba ebonakalayo, usenakho ukuthatha iifoto okanye scan amaxwebhu ezibalulekileyo iikopi imeyili kuwe. Ngalo ndlela, ukuba smart okanye tablet ayifumaneki, ungangena kwi email yakho ukude uze ungene amaxwebhu kufuneka.
EBrussels ku Bonn Uqeqesha
Antwerp ku Bonn Uqeqesha
Halle ku Bonn Uqeqesha
EGhent ku Bonn Uqeqesha
Xa uthatha i uhambo ngololiwe wasebusuku, kuza kufuneka ukuba ukhumbule ukuba upakishe uloliwe zonke essentials zakho engxoweni encinane ubhaka yakho okanye ibhegi cross-umzimba. Quka zokuhlamba ezisisiseko ezifana ibrashi ucole, ibrashi okanye ikama, zobuso Sula, kunye amafutha. Ukuba umntu olele ukukhanya, ungafuna ukongeza earplugs kunye isigqumathelo ubuthongo bag yakho ubusuku.
Kananjalo kuya kufuneka ukuba ezinye zokulala ayisindi, okanye ukuba ukhetha, iingubo ezitofotofo ungalala ku, ezifana track iblukhwe okanye leggings yangaphantsi elukwe okanye ngaphezulu itanki ngenkxaso ezifihlakeleyo. Musa ukulibala isikhafu yakho enkulu, apho ezinokuqengqeleka kwaye sebenzisa njenge umqamelo okanye ingubo extra.
Ulungele ukupakisha ukuba uhambo ngololiwe okanye babhukishe uhambo lwakho Uloliwe malunga Italy? Qiniseka ukuba undwendwela Gcina A Isitimela kwiwebhusayithi yendawo amatikiti oololiwe kubhukishelwa zohambo yaseYurophu kwi amanani angcono. Fumana ukuhlola!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-pack-for-a-train-trip-across-italy/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / pl ukuba / fr okanye / ngayo kwiilwimi ezininzi.
#ukupakisha tips uloliwe traveltips